निर्मला पन्त प्रकरणमा नयाँ मोडमा, दूर्गादेवीको वयान फेरियो, अब के होला ? – जलजला अनलाइन
Posted on March 14, 2019 Author Jaljala Online	Comments Off on निर्मला पन्त प्रकरणमा नयाँ मोडमा, दूर्गादेवीको वयान फेरियो, अब के होला ?
फागुन ३०, काठमाडौं । गत साउनमा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तका अपराधी अझै फेला परेका छैनन् ।
यो खबर अनलाइनखबरबाट साभार गरिएको हो, यसअघि पक्राउ परेका व्यक्ति प्रमाण अभावमा छुटिसकेका छन् । यसैवीच, निर्मलाकी आमा दूर्गादेवीले बलात्कारी आफ्नै घर वरिपरि घुमिरहेको भन्दै पक्राउ गर्न आग्रह गरेकी छिन् ।
दुर्गादेवीले अगाडि भनिन्, ‘मेरी छोरीको हत्यारा अहिले पनि मेरो घरअगाडि खुल्लमखुल्ला घुमिरहेको हुन्छ । उसको अनुहार देख्दा पनि डर लाग्न थालेको छ । अस्ति मेरी अर्की छोरीलाई भेटेर जिस्क्याएछ । मेरी छोरीहरु पनि मानवअधिकारवादीको डरले गर्दा उसको विरुद्ध बोल्न सक्दैनन् । उसबाट निर्मलाजस्ता धेरै छोरीहरु असुरक्षित छन्, त्यसैले प्रहरीले पक्राउ गरिहालोस् ।’
बृहत् दाङ सिँचाइ अयोजनाद्वारा १२ पोखरी निर्माण, कहाँ-कहाँ छन् ?
Posted on October 13, 2018 Author Jaljala Online
असोज २७, लमही । दाङको खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ गर्ने योजनाअनुसार सञ्चालनमा ल्याइएको बृहत् दाङ सिँचाइ आयोजनाले अहिलेसम्म १२ वटा पोखरी निर्माण गरिसकेको छ । जिल्लाको ५६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलको खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ पु¥याउने उद्देश्यले दुई वर्ष अघि सञ्चालनमा ल्याइएको सो आयोजनाले अहिलेसम्म १२ वटा पोखरी निर्माण गरिसकेको सूचना अधिकारी मदनप्रसाद शाहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार […]
प्युठानका २ युवाको मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी मृत्यु
Posted on August 11, 2018 Author Jaljala Online
साउन २६, काठमाडौँ । सडक दुर्घटनामा परी पूर्वी नवलपरासीको दुम्कीवासमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दुम्कीवास–अरुणखोला जंगलमा आज दिउँसो बोलेरो जीप र मोटरसाइकल एक आपसमा ठोक्किदा उक्त दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परी लिवाङ प्युठानका ३२ वर्षीया जगतबहादुर परियार र १० वर्षिया विवेक परियारको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको […]
दाङमा प्रदेश सरकारका दर्जनौ खानेपानी आयोजना, कहाँ-कहाँ परे ? (सुचिसहित)
Posted on September 13, 2018 September 13, 2018 Author Jaljala Online
भदौ २८, दाङ । प्रदेश नम्बर ५ सरकारले दाङका बिभिन्न खानेपानी आयोजनाहरुका लागि बजेट बिनियोजन गरेको छ । आयोजनाका विस्तृत विवरण – बस्तीकोत करमकोत सिमलतारा बृहद खानेपानी आयोजना । – बोल्दीचरिवाङ सैघा बृहद खानेपानी आयोजना । – बेरुवाबन्जारी खानेपानी आयोजना । – हसनापुर बेल्ताकुरा खानेपानी आयोजना । – गैरीखेत चीसापानी खानेपानी आयोजना । – कोइलावास […]
रातभरि कालिकोटमा प्रहरी सर्च, विप्लवको हेडक्वार्टर र सडक निर्माणमा रोक, अब के होला ?